द्रुत सेवा (५ कार्य दिन) अन्तर्गत राहदानी आवेदन दिन इच्छुक आवेदकहरुले आफ्नो जिल्लाको सि.डि.ओ. कार्यालयबाट सिफारिस ल्याएर राहदानी विभाग,नारानहिटीमा आवेदन दिन सक्नु हुन्छ । राहदानी दस्तुर ने. रू.१०,०००/- तिर्नु पर्छ । जिल्लाबाट राहदानी आवेदन बुझाउंदा २५ दिनमा राहदानी पाउन सकिन्छ, राहदानी दस्तुर ने. रू.५०००/- तिर्नु पर्छ ।